LinSSID, wifi network scanner yeLinux | Linux Vakapindwa muropa
LinSSID, yeWi-Fi network scanner yeLinux
Yakaenda kare inguva iyo vashandisi ve Linux Isu takange tisina maturusi muhuwandu sezvazvinoitika muWindows uye padiki padiki muMac OS X. Nhasi tinogona kunakidzwa nechipo icho makore mazhinji apfuura (ngatitii, pakutanga kwezana rino ramakore) zvatisingafungire, uye ndiyo mhando yekushandisa iri try isu tinotova nedzimwe nzira dzatinogona kusarudza. Semuenzaniso, isu tine LinSSID chishandiso chakanakisa che tarisa wifi network muLinux.
Icho chishandiso chakagadzirwa muC ++ uye qt 5 iyo inoongorora netiweki dzeWi-Fi mu2,4 Ghz uye 5 Ghz chiteshi, uye izvo zvinotibvumidza isu kuwana maratidziro atinogona kusvika. Tinogona zita rekutarisa (SSID), MAC kero, chiteshi, chengetedzo mhando (WPA2, WEP, WPA2 / SK) kana simba rechiratidzoZvese zviripo kubva kune interface iyo, sezvatinoona mumufananidzo wepamusoro wepositi, yakarongeka chaizvo uye ine zvakawanda zvakafanana neInSSIDer (chishandiso cheWindows).
Zvese zvatinofanirwa kuita kuisa LinSSID, pinda password password uye kana iro hwindo guru rikaratidzwa tinosarudza chinongedzo chatichatora (semuenzaniso, wlan0) wobva wadzvanya pane bhatani rine 'Play' icon. Panguva iyoyo basa re wifi network scan, zvinotora masekonzi mashoma.
Tinogona kurodha pasi LinSSID (ese ari maviri 32-bit uye makumi matanhatu neshanu shanduro) kubva nzvimbo yako paSourceforge kana kana tikashandisa Ubuntu, isai iyo kurodha pasi .deb package yakawanikwa ipapo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Resources » LinSSID, yeWi-Fi network scanner yeLinux
WPA inovaratidza kwandiri seWEP.
Ini ndanga ndisingazvizive, ndichaenda kuzviratidza.
Pindura kuna sayo
Iyo njodzi, iko kunyorera kunoramba kuchimhanya kudzamara kudzora kwayo kwadzimwa pachiratidziri.
BackBox Linux 4.1, vhezheni itsva yeiyi yekuchengetedza distro
Zviri kuwedzera nyore kuisa Linux pane Chromebook